အိတ်ပေါက်နဲ့ ဖားကောက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » အိတ်ပေါက်နဲ့ ဖားကောက်
Posted by etone on May 30, 2011 in Short Story | 19 comments
ဗေဒင် ယတြာတွေကို အယုံကြည်မရှိပေမဲ့ ပိုက်ဆံရမယ့်ကိစ္စကိုတော့ ကျမစိတ်ဝင်စားခဲ့သည်… ။ ထို့ကြောင့်လည်း သူငယ်ချင်းများနှင့် သွားဖူးခဲ့သည့်… ဓါတ်ရိုက်ဓါတ်ဆင်ဖြင့် နာမည်ကြီးသော တားရော့ဗေဒင်ဆရာမဆီသို့ ကျမသွားရန်ဆိုင်းပြင်ခဲ့သည်… ။ ငွေဝင်၊ ငွေမြဲစေမည့် အဆောင်ကောင်းတခုလောက် ကျမလိုအပ်သည်… မသုံးပဲထားလျှင် ငွေမြဲမည်ကို သိသော်လည်း အိတ်ပေါက်နဲ့ ဖားကောက်သောကျမအတွက်တော့ … ဘယ်လောက်ငွေဝင်ဝင် အဖတ်မတင်ခဲ့ပေ … ။ ဆရာမဧ။် အဆောင်သည် ငွေဝင်သည် လာဘ်ရွှင်သည်ဟု ကြားသိသဖြင့် … အပန်းမကြီးသောအလုပ်ဟု သတ်မှတ်ကာ အဆောင်သွားလုပ်ရန် သူငယ်ချင်းတယောက်နှင့် တိုင်ပင်သည်… ။
လွန်ခဲ့သော သုံးနှစ်ခန့်က မိုးသည်းသော တနင်္ဂနွေ မနက်ခင်းတစ်ခုတွင် ကျမနှင့် သူငယ်ချင်းတယောက် မိုးကာအကျီင်္ ကိုယ်စီဖြင့် ထီးဆောင်းကာ ကားမှတ်တိုင်သို့ ထွက်လာခဲ့သည်… ။ မိုးသည်းသဖြင့် ဘောင်းဘီတိုလေးများကိုပင် အောက်နားထပ်ခေါက်ထားလိုက်သေးသည်… ။ အဆောင်မလုပ်ခင် လိုအပ်သော အရာမှာ ကားစီးပြီး ပြန်အမ်းငွေထဲမှ အကြီးဆုံးပိုက်ဆံဖြစ်ရမည် ဖြစ်သောကြောင့် နှစ်မှတ်တိုင်သာ ဝေးသော ခရီးသို့ ကျမတို့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ကားစီးသွားကြသည်… ။ မိုးကောင်းသဖြင့် ကားပေါ်တွင် လူသိပ်မပါပေ… ။ ကားပေါ် ရောက်သည်နှင့် သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် အလုအယှက် စပယ်ယာကို တစ်ထောင်တန်တယောက်တရွက်စီ ပေးပြီး ကားခအဖြစ်ယူစေသည်… ပြီးနောက် တယောက်စာပဲ ယူရန်ပြောကာ အချင်းချင်း တိုင်ပင်ထားသည့် အတိုင်း တယောက်နှင့် တယောက် မသိချင်ယောင်ဆောင်နေကြသည်… ။ ထိုအခါ မနက်ခင်း လူမပါသော ကားစပါယ်ယာက ပိုက်ဆံမအမ်းနိုင်သဖြင့် တယောက်ခသာ ပြန်အမ်ပြီး ကျန်တယောက်ကိုတော့ အခမဲ့ စီးစေပါသည်… ။ ကျမတို့လည်း အကြံစည်တိုင်း စပါယ်ယာဆီမှ နှစ်ယောက်စလုံး ပိုက်ဆံ ပြန်အမ်းမခံရသဖြင့် … တမှတ်တိုင်သာ ကားစီးကာ နောက်မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းခဲ့သည်… ။ ထို့နောက် နောက်ကားစီးကာ .. ထောင်တန်တရွက်ကိုအကြွေရအောင် အကြံဖန်ထုပြန်သည်… ။ ကျမကိုပြန်အမ်းသော ပိုက်ဆံထဲတွင် အကြီးဆုံး အရွက်သည် ငါးရာတန်အရွက်ဖြစ်သည် သို့သော်စုတ်ပြဲနေပေသည်… ကျမသူငယ်ချင်းကို ပြနအမ်းသော အရွက်တွင်တော့ နှစ်ရာတန်သည် အကြီးဆုံး ဖြစ်သည်… အကြီးဆုံးဟုဆိုသည်မှာ တန်ဖိုးကိုဆိုလိုရင်းဖြစ်သည်… ။ စပါယ်ယာပြန်အမ်းငွေလေးကို ယူကာ ဗေဒင်ဆရာမဆီသို့ ရောက်သွားကြသည်… ။
ဗေဒင်ဟောခန်းသည် … ကြွေပြားခင်းထားသောကြောင့် မိုးအေးအေးတွင် အေးစိမ့်နေပြီး …. အဲယားကွန်းဒဏ်ကြောင့်လည်း ဗေဒင်မေးသူများ ခိုက်ခိုက်တုန်နေကြသည်… သို့သော် ဟန်ဆောင်ကာ လက်ပိုက်သလိုလို ၊ အိပ်ထဲ လိုက်နှိုက်ရှာသလိုလို ဟိုလုပ်ဒီလုပ်ဖြင့် အရှက်ပြေလျှောက်လုပ်ပြနေကြသည်… ။ ကျမတို့ နှစ်ယောက်ကတော့ လိတ်ထားသော ဘောင်းဘီတိုလေးတွေကို ပြန်ဖြေချနေသည်… ချမ်းတဲ့စိတ်ကလည်း မပျောက်သေးပေ… ။ နာရီဝက်လောက် ဒုက္ခခံပြီးချိန် ကြားဖြတ်တန်းစီမှူနဲ့ ရှေ့ဆုံးသို့ ရောက် သွားလေတော့သည်… ။ ဆရာမက ပိုက်ဆံပေါ်မှာ စမတွေ ရေးပေးပြီး ပြန်လွှတ်လိုက်တယ်… ။
အိမ်ရောက်တော့ မိုးစိုလို့ နဂိုကတည်းက စုတ်ပြဲပြဲဖြစ်နေတဲ့ ပိုက်ဆံလေးကို ပလပ်စတစ်လောင်းပြီး အိတ်ထဲသွားလေရာထည့်သွားတယ်… လူ့စိတ်ပဲလား ၊ အဆောင်ကောင်းလို့လားမသိဘူး… အဆောင်လေး ပိုက်ဆံအိတ်ထဲကို ရောက်လာတဲ့ နောက်ပိုင်း ပိုက်ဆံ အ၀င် ပိုများလာတယ် … နည်းနည်းပဲ သုံးဖြစ်တယ်လို့ ခံစားမိတယ်.. ။ စိတ်ကပဲ ဖြစ်နေတာလား မသိဘူး … ။ ဘာဖြစ်ဖြစ်လေ ပိုက်ဆံပိုဝင်လာတာတော့ ပျော်တာပေါ့ … ။ ကောင်းကောင်းတောင် မပျော်လိုက်ရပါဘူး … သုံးလေးလလောက် အိတ်ထဲ ပိုက်ဆံလေး အိတ်ထဲမှာနေပြီး ……………ကြာတော့ မှိုစော်နံလာတာကြောင့် ပြန်ထုတ်ပြီး အပြင်မှာ ထားတာ … အိမ်ကဘယ်သူမသွားလဲ မသိတော့ဘူး …. ပျောက်သွားခဲ့တာ အခုထိတိုင်ပဲ … အခုတော့လည်း ထုံးစံအတိုင်း …အိပ်ပေါက်နဲ့ ဖားပြန်ကောက်နေရပါတော့တယ်… ။
မိန်းကလေးတွေများ တယ်လည်း ဆင်ခြေများပါ့ ။
ဗေဒင် ယတြာ မယုံကြည်မရှိဘူးလည်း ပြောသေး ၊ ဗေဒင်ခန်းဘက် ခြေဦးမလှည့်လျှင် မနေနိုင်ကြဘူး။
တော်သေးတာပေါ့ အီးတုံး တယောက် စပါယ်ယာ မေ့သွားလို. တထောင်တန် ဆုံးပြီတွက်နေတာ။
မမှီရေ… သူ့ဆီက ပြန်အမ်းမဲ့ ပိုက်ဆံကို စောင့်နေတာဆိုတော့ … မျက်လုံးကြီးပြူးပြီး ကြည့်နေလိုက်တာနဲ့ စပါယ်ယာက အော်တိုမက်တစ် ပြန်အမ်းတယ်
လိပ်စာလေးပြောပြပါလား မအီးတုံး ရေ….
ဒါနဲ့ဘာလို့ ၁၀၀၀ တန်အသစ် ကျပ်ကျွတ်မှာ စမ မဆွဲခိုင်းတာလဲ…..။
1000 တန် အသစ်မှာ ဆွဲခိုင်းလို့မရပါဘူး …။
သူ့သဘောသဘာဝကိုက စပါယ်ယာကို တစ်ထောင်တန်ပေးရမှာပါ … အဲ့ဒီက ပြန်အမ်းတဲ့ ပိုက်ဆံထဲက အတန် (တန်ဖိုး) အကြီးဆုံးကို ယူပြီး စမ ဆွဲပေးတာပါ… မယုံတ၀က်ယုံတ၀က်နဲ့ … ပိုက်ဆံဝင်တယ်ဆိုတော့လည်း … အပန်းမကြီးဘူးထင်လို့ လုပ်လိုက်တာ
စမ်ချောင်း ၊ ဇလွန်လမ်းမှာ ရှိပါတယ်… အိမ်နံပါတ်က ၃ လား ၊ ဘာလားပဲ မမှတ်မိတော့ဘူး ….
wed ကလွဲလို့ နေ့တိုင်းဖွင့်တယ် မနက် ကိုးခွဲကနေ ၊ ညနေ သုံးနာရီထိပါ… ။ ထမင်းစားချိန်နဲ့ ချိန်သွားပါ… သူထမင်းစားချိန်နဲ့ ကြုံလျှင် တစ်နာရီလောက် ငုတ်တုတ်စောင့်ရတတ်တယ်…. ။
စပါယ်ယာ ပြန်အမ်းတဲ့ ပိုက်ဆံ လာလို့ လိုအပ်သလဲ ဆိုရင်တော့ စပါယ်ယာ ဆိုသည်မှာ ပိုက်ဆံ အထပ်လိုက် ကိုင်ပြီးတော့ အ၀င်တွေကြီးပဲ စုနေရတာပါ။ သူဆီက ပြန်အန်းတဲ့ ပိုက်ဆံဆိုတော့ အ၀င် ဓါတ်သဘောရထားတဲ့ ပိုက်ဆံ ဖြစ်နေလို့.. အဲဒါကိုမှ စမ ဆွဲပြီး လုပ်တဲ့ အတွက် ပိုက်ဆံ အ၀င်ကောင်းတဲ့ သဘော ဖြစ်သွားတာ.. တနည်းအားဖြင့် ဓါတ်ရိုက် ဓါတ်ဆင်ပါပဲ။ အ၀င်ဓါတ် ကို စပါယ်ယာဆီက လူတယ်.. အတန်ကြီး ဆိုတာကလည်း အလုံးလိုက် အခဲလိုက် ၀င်မယ် ဆိုရင် အကြီး ဖြစ်ရမယ် ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။
မမဆူးမမ ကတော်တော်သိတာဘဲနော် …… ဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင်လည်းရတယ်……
အဲ့ဒီတုန်းက ဆင်မပေါ်သေးဘူး အစ်မရဲ့
အီးတုံး – မိုးသည်းသဖြင့် ဘောင်းဘီတိုလေးများကိုပင် အောက်နားထပ်ခေါက်ထားလိုက်သေးသည်…
ကြောင်ကြီး – မိမိုးဘယ်တော့ရွာမှာလည်း၊ ကြောင်ကြီးဘယ်တော့ ပျော်နိုင်မလဲ……:P
မမရေ .. ဗေဒင်ဆရာမ လိပ်စာလေး မျှပါဦး ..
ပလိုင်းပေါက်နှင့် ဖားကောက်မဟုတ်ဘူးလား…. ပလိုင်းရှာမတွေ့မလို့ အိတ်ပဲ ယူသွားတာလား
အညာဒေသဘက်မှာ အိတ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်လို့သုံးကြပါတယ်။ သူ့ဒေသနဲ့သူ မှန်မှာပါ။ အဓိပ္ပာယ်က အတူတူပါပဲ။ဒေသိယ စကားကို နောက်စရာ မဟုတ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ထဲကို ၀င်ပြီးရင် ပြန်မထွက်တဲ့ အဆောင်ရှိတယ်။
ဂယ်ပေါက်နဲ့ ဟ ပေးထားတဲ့အပေါက်သာ မမှားဘို့အရေးကြီးတာပါနော်……………………….